जनकपुरधामका व्यापारीको पीडा : व्यापार ठप्प छ, ब्याज कसरी तिर्ने ?
बजार खुला, व्यवसाय ठप्प
साउन १५, जनकपुरधाम । लकडाउन अघि जनकपुरको शिव चौकस्थित एकतारे होटल वेलकममा निकै भिडभाड हुन्थ्यो । होटलमा सेवाग्राहीको यतिसम्म चाप हुन्थ्यो कि कोठा लिन कम्तीमा दुई दिन पहिले र कुनै पार्टी, सेमिनार, समारोह अथवा कार्यक्रम गर्नु परे एक हप्ता पहिला नै बुक गर्नु पथ्र्यो ।
होटलका सञ्चालक अभिषेक झुनझुनबालाका अनुसार होटलको कुल क्षमता अनुसार त्यतिबेला दैनिक ९० प्रतिशत कोठा बुक हुन्थ्यो, प्रतिमहिना ३५ ओटासम्म कार्यक्रम हुन्थ्यो ।
त्यतिबेला प्रतिमहिना रू. ३० देखि ४० लाखसम्मको कारोबार हुने गरेको उनले बताए ।
होटलमा त्यतिबेला सेवाग्राहीको घुइँचो लाग्थ्यो । तर लकडाउनसँगै करीब पाँच महीना बन्द भएको होटल एक महीना यता खुला छ । तर सेवाग्राही शून्य रहेको अभिषेकले बताए । सरकारले गएको असार १५ गते लकडाउन हटाए पनि व्यवसाय ठप्प छ । पहिला होटलका दिनकै ३५ ओटासम्म बुक हुने गरेको भन्दै अहिले महीनामा मुस्किलले ३० ओटा कोठा बुक हुने गरेको उनले बताए ।
पटक–पटक बैंक ब्याज तिर्न ताकेता
होटल तथा पर्यटन व्यवसाय धनुषाका अध्यक्षसमेत रहेका होटल व्यवसायी सुरेन्द्र भण्डारीले अहिले होटल खोल्ने र बन्द गर्ने काम मात्रै भएको बताए ।
‘करीब पाँच महीनाको बन्दाबन्दीपछि बजार खुला छ, व्यवसाय ठप्प छ’, उनले भने, ‘पाँच महीना यता एक रुपैयाँको पनि कारोबार भएको छैन तर, सरकारले कर तिर्न र बैंकले ब्याज तिर्न दिनहुँ फोन गरिरहेकै छन् ।’
कर्जा लिएर व्यापार सञ्चालन गरेको व्यवसायिको पीडा सुनाउँदै कारोबार ठप्प हुँदा उनीहरू सकसमा परेको उनले सुनाए ।
बैंकले ब्याज बुझाउन ताकेता मात्र गरेका छैनन्, कतिपयमा साविकभन्दा बढाएर ब्याज लिएको उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश नं २ का अध्यक्ष शिवशंकर साह हिराले बताए । यही अवस्था रह्यो भने जनकपुरका ५० प्रतिशत व्यापारी पलायन हुने उनको दाबी छ ।
‘मासिक रू.१४ हजार त बैंकको ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्छ । व्यापार छैन । तैपनि बैंकले ताकेता गरिरहेको छ’, पंकज बस्त्रालयका सञ्चालक अरविन्द साहले भने, ‘यस्तै हो भने व्यापारीहरू सडक छाप बन्ने अवस्था आउनेछ ।’
उनले आफूलाई बैंकले पटक– पटक ब्याज तिर्न ताकेता गरेको बताए । तर, आम्दानी नभएपछि ब्याज अहिलेसम्म तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै जनकपुर बजारका पसल खुलेका छन् । मुख्य बजार पिडारी चोक, रामानन्द चोक, जनक चोक, शिव चोक, जानकी मन्दिर लाइनमा ठूला– ठूला वस्त्रालय र फेन्सी पसल सञ्चालनमा छन् तर ग्राहक छैनन् । सधैं भीड हुने पसल सुनसान देखिन्छन् ।
ग्राहकको प्रतीक्षा गर्दागर्दै थाकेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । त्यसमाथि व्यापार गर्न लिएको कर्जा बुझाउन बैंकले गर्ने ताकेताले उनीहरू आजित भएका छन् ।
धमाधम व्यवसाय बन्द
करीब पाँच महीनाको लामो बन्दाबन्दीले व्यवसाय नै बन्द गर्ने स्थिति आएको व्यापारीहरुले बताएका छन् । जनकपुरधाममा कतिपय व्यवसायीले कर्जा भार थेग्न नसकेर व्यवसाय नै बन्द गर्न पनि थालेका छन् ।
शिव ग्यास स्टोर्सका सञ्चालकले कर्जाले थेग्न नसकेर पसल नै विक्री गरे । ‘दुई महीना पहिले कर्जाको भार थेग्न नसकेर पसल नै विक्री गर्नु पर्‍यो । सञ्चालक आर्यन यादवले भने, ‘त्यो कुरा अहिले सम्झिदा मन पोल्छ ।’
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव जितेन्द्र महासेठले यकिन तथ्यांक नभएपनि लकडाउनका कारण धेरै व्यापारी विस्थापित भएको बताए ।
‘दिनभर कुर्दा एउटै ग्राहक आउँदैनन् । पसल खोले पनि व्यापार शून्य छ,’ विक्री गर्ने मनस्थितिमा रहेका फेन्सी पसलका सञ्चालक क्रिस साहले भने, ‘ऋण गरेर खोलेको व्यापार चौपट भयो, हामी धराशयी भयौं ।’
ऋण लिएर किनेका सामान पसलमा थन्किएका छन् । तर बैंकले ब्याजमाथि ब्याज खप्ट्याइरहेको छ । घरबेटीले घरभाडा जोडिरहेका छन् ।
‘बैंकबाट दिनहुँ फोन गरेर ब्याज बुझाउन ताकेता गर्छन् । घरबेटीले भाडा मागिरहेछन्,’ उनले गुनासो गरे, ‘व्यापार नै नभएपछि कसरी बैंकको ब्याज बुझाउने ? कसरी घरबहाल बुझाउने ? तनावमाथि तनाव छ ।’
जनकपुर बजारमा व्यापार हुन स्थानिय मात्र आएर र किनेर हुँदैन । आसपासका साथै जिल्लाबाहिरका व्यक्ति किनमेलमा आउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात नचल्दा बाहिरी ग्राहक आएका छैनन् । बजार क्षेत्रकै मान्छे पनि किनमेलमा निस्केका छैनन् । विवाह, ब्रतवन्ध, पूजाजस्ता धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलाप नहुँदा पनि व्यापार ठप्प छ ।
सार्वजनिक यातायात नचल्ने, विवाह, पूजा, सामाजिक र धार्मिक अनुष्ठान पनि कम हुने गरेकाले पनि व्यापार नभएको व्यापारीहरुको गुनासो छ ।
कोरोना संक्रमित बढेपछि होटेलमा आइसोलेशन[२०७७ सावन, २५]
महोत्तरीमा ९ जना सशस्त्र प्रहरीसहित १४ जनामा संक्रमण पुष्टि[२०७७ सावन, २४]
कोरोना संक्रमित बढेपछि वीरगञ्जका ४ ओटा होटलको आईसोलेशनमा उपचार शुरु[२०७७ सावन, २४]